သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: December 2008
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:17 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ပင်လယ်လေတွေက တ၀ုန်းဝုန်း တိုက်ခတ်နေသည်။ ဆံပင်တွေက အထိန်းအကွပ်မဲ့စွာ။ ကြယ်သီးတပ်မထားသော အနွေးထည်အင်္ကျီကို ရင်ဖုံးအကျီ င်္လို ဆွဲစေ့ကာ လက်တစ်ဘက်ကို ဂျိုင်းကြားထဲ ထည့်ထားလိုက်သည်။ ဖုန်းကိုင်ထားသော ကျန်လက်တစ်ဖက်ကတော့ နားနားမှာ။ ပင်လယ်လှိုင်းတွေက မာန်ဟုန်ကြီးစွာ တဝေါဝေါ ကမ်းကိုရိုက်ခတ်နေသည်။ မိုးကောင်းကင်ကတော့ မဲမဲမှောင်လာနေပြီ။ ပင်လယ်ဇင်ယော်ကြီးတွေက တုပ်တုပ်ရွှဲမှာစိုးရွံ့သည့်အလား ကမ်းစပ်က သစ်တုံးပြတ်တွေအောက်မှာ ပုံးခိုရန်နေရာရှာနေကြသည်။ လေပြင်းထဲမှာ ပျံသန်းနေသော ငှက်အချို့တို့ ဦးတည်ရာမရ လေဟုန်နှင့် မျောသွားကြသည်။ တဆတ်ဆတ်တုန်ခါလာသော ဒူးများကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ဆံပင်တွေက မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို ဖုံးအုပ်သွားသည်။
“ရှင်.. ဟလို… ဘာမှ မကြားရဘူး..”
“မ… မ .. ဟလို… မောင်တို့… တစ်ကယ်ကို မဖြစ်နိုင်ဘူးလား”
“ဟင့်အင်း.. ဘယ်လိုမှ မကောင်းနိုင်ဘူး၊ မ.. ရက်စက်လွန်းပါတယ်”
“ဘယ်တုန်းကမှ ဖြစ်နိုင်တယ် မပြောခဲ့ရပါလားကွယ်”
“လေယာဉ်ကွင်းလာတဲ့ လမ်းတစ်လျောက်လုံး တွေ့သမျှ ဘုရားကျောင်းမှာ၊ သုံးလေးကျောင်းလောက် ရှိမယ်ထင်တယ်၊ သစ္စာဆိုခဲ့တယ်”
“ချစ်သော.. မ နဲ့ အတူတူမနေရရင် ဒီခရီးဟာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေ…….. လို့”
“ဟာ.. ခက်တာပဲ။ မဟုတ်တာတွေ မဆိုနဲ့လေ၊ နောက်ပြီး ဘုရားဆိုတာကို မယုံဘူးဆို”
“ဟုတ်တယ်လေ.. မ က မောင့် ဘုရားပဲဟာကို”
“အော်.. အင်းအင်း.. အဟင်းဟင်း၊ ငရဲတွေကြီးကုန်ပါ့မယ်ကွယ်”
“တော်ပြီ မ… မဟာ တော်တော်လေးကို သွေးအေးလွန်းပါတယ်။ မောင်… သွားပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သိပ်ချစ်တယ်”
ဖုန်းကျသွားသည်။ မေးတွေ ခိုက်ခိုက်တုန်လာသည်။ ကားဆီသို့ လေးတွဲ့စွာလျောက်လာသည်။ ကားထဲမှာ မိနစ်ပေါင်းများစွာ ထိုင်နေမိသည်။ ပင်လယ်လေပြင်းတွေအောက်မှာ ထင်းရူးပင်တွေကတော့ ဆောက်တည်ရာမဲ့စွာ။
မရောက်ဖူးသော အရပ်ဒေသတစ်ခုက စိတ်ကို လန်းဆန်းစေသင့်သလောက် မလန်းဆန်းစေနိုင်ပြီ။ ခြောက်ခြောက်ကပ်ကပ် ချုံပုတ်ပင်ပုများ၊ ရှားစောင်းပင်များက မျက်စိ အမြင်ဆန်းစေသည်။ ပူစပ်သော နေရောင်ခြည်က သည်တောမြို့လေး၏ အမိုးပြန့်ပြန့်အိမ်များပေါ်သို့ ထိုးကျနေသည်။ နေရာလေး တစ်နေရာမှ လေယာဉ်ကွင်းဆီသို့ ငှားလာသော ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းရင်း ညနေခင်း လေညှင်းခံထွက်လာသည်။ ညနေခင်းဆိုသည့်တိုင် အပူချိန်က မြင့်နေသေးသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော့ သူမ မျက်စိက တောက်လျောက် သတိထားကြည့်နေမိသည်။ ခုထိတော့ သူမ ရှာနေသော အရာများကို မတွေ့သေး။
လမ်းဘေးက အအေးဆိုင်လေး တစ်ဆိုင်ရှေ့မှာ ကားကိုထိုးရပ်လိုက်သည်။ ကားအရှိန်ကြောင့် ဖုန်တွေက တစ်ထောင်းထောင်း ထသွားသည်။ ဆိုင်ထဲဝင် အအေးတစ်ခွက်ဝယ်အပြီး ဆိုင်ပြင်ခုံတန်းလေးမှာ ထိုင်နေမိသည်။ ဘေးခုံမှာ တစ်ယောက်တည်း ထိုင်ပြီး အအေးခွက်ကို စိမ်ပြေနပြေသောက်နေသော အဘိုးကြီးတစ်ဦးကို သူမ ပြုံးပြလိုက်သည်။
“ဦးလေး.. ဒီလိပ်စာကနေ လေယာဉ်ကွင်းကိုသွားတဲ့လမ်း ဘယ်နှစ်လမ်းရှိလဲဟင်”
လက်ထဲက လိပ်စာ စာရွက်ကို သူမပြတော့ အဘိုးကြီးက ယူကြည့်သည်။
“ဒီမြို့လေးမှာ မ်ိန်းလမ်းမက ဒီတစ်လမ်းထဲကွယ့်”
“ဟိုဘက်ခြမ်းမှာတော့ တစ်လမ်းရှိပေမယ့် ဒီလမ်းပဲ လူသုံးတာများတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ”
“ဒီလမ်းပေါ်မှာ ဘုရားကျောင်းတွေ သုံးလေးကျောင်းရှိလားလို့”
“ဘုရားကျောင်းတွေက ဒီဘက်မှာ ဘယ်ရှိမလဲကွဲ့၊ အဘဒီမှာနေလာတာ မွေးကတည်းက ဒီလမ်းပေါ်မှာ ဘာ ဘုရားကျောင်းမှ မရှိဘူး”
“ခုန အဘပြောတဲ့ လေယာဉ်ကွင်းသွားတဲ့ နောက်တစ်လမ်းဆိုတဲ့ ဟိုဘက်ခြမ်းလမ်းကော”
“ပိုဆိုးတယ်၊ ဘာဘုရားကျောင်းမှ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိဘူး။ ဒီမြို့လေးမှာ ဘုရားကျောင်းဆိုတာ ဟိုး တောင်ပေါ်မှာ တစ်ကျောင်းထဲပဲရှိတာ ကလေးမ ရဲ့”
သူမ နေကာမျက်မှန်ကို ဆံပင်တွေပေါ်မှ ဆွဲချလိုက်ပြီး မျက်လုံးတွေပေါ်သို့ ဖုံးအုပ်ပေးလိုက်သည်။ ပြုံးယောင်သမ်းနေသော နှုတ်ခမ်းကို လိမ္မော်ရည် ချိုမြမြက မွတ်သိပ်စွာ နှုတ်ဆက်လိုက်လေသည်။
1. သူညာပါတယ်။ တကယ့်ကိုပဲကွယ်…. မရှိပဲနဲ့ ..ဆုတောင်းတယ်ပြောတယ်….
Comment by sin dan lar — December 10, 2008 @ 2:57 am |
2. မွန်သာဆိုရင်တော့ အဲဒီဘုရားကျောင်းတွေအကြောင်း မေးမိတာကို နောင်တရနေမလားပဲ
တခါတလေ မသိခြင်းတွေက ပိုပြီးဆွတ်ပျံ့စရာ နင့်နဲ့လှိုက်မောစရာကောင်းသလားလို့
တခါတခါ စိတ်ကူးယဉ်တာများသွားတယ်မမး))
Comment by မွန် — December 10, 2008 @ 5:45 am |
3. ဒီပိုစ်ရေးကတည်းက ရယ်ချင်နေတာ sin dan lar ကော့မန့်ဖတ်ပြီး ပိုရယ်ချင်သွားမိတယ်။
မွန်… ဟုတ်တယ်နော်.. တစ်ခါတစ်ခါလဲ မသိတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
Comment by မလေး — December 10, 2008 @ 11:42 am |
4. kg lay t ( B ) nay yar ka nay 1 nay yar yar ko htwatt kwar pho pyin sin nay t
kg ma lay nae 1 nay yar yar mar 1 nay nay sone pe, Lat Twal kya pho kyoe sarr see yone nay pone ya par tal
kg ma lay nay yar t Myanmar pyay phit pone ma ya hu khant man ya par tal, 1995 ku nit , pin lae day da mar hand phone ya pho so tar , ma phit nai tay hu U sa taw kyong phit ei ,htoapyin , Myanmar pyin lal day da mar , Htin Suu Pin ko tway lay tway hta ma shi hu htin t
dar so kg ma lay t , A aye po taw oversea mar phit nai ei A bae kyong so ya taw , pin lal pyin A neeanar twin shi taw Htin Shuu Pin myar kyong phit par tal
kg lay phone sat taw nay yar( B ) har, phone tway htu htat taw nay yar phit pe , Shar Song Pin myar shi taw kyong , A Lae Pai day da phit nai ei
A lae pain day da mar , pa yar kyong shi lay shi hta tate ma shi ( myanmar ) pyay twin , pe tot ( tong kone ka lay ) paw mar shi tal so htar ei
A lae pain day da mar Toung Kone shi kg shi nai ei , but sharr ei , myay pyant day da phit taw kyong phit ei
Kg lay ye’ sa khar tway har yuu toot mu sate kam sarr chat shi taw Lu nge 1 yout ye Sa Yite ko paw lwin say par tal ( Kg Ei ) but sin sarr tat thuatwatt so yin tot ( Lu Nyar 1 yout phit kg phit nai kyong sa khar lone myar ka Pya Ta Htar ei , ( Po Kg ei )
eg :“ချစ်သော.. မ နဲ့ အတူတူမနေရရင် ဒီခရီးဟာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေ…….. လို့” OR “ဟုတ်တယ်လေ.. မ က မောင့် ဘုရားပဲဟာကို”
To Taw, zat lanaya, kg ma lay 10 nit lone lone kam sarr chat tway ount ta nway nway phit kae ya taw pone san lay yay htar ei , ( Kg Ei )
A htat par sar myar har Sar Phat Thu ei , zat lanapaw sway nway mu tat tat tar phit par tal .
Layy sar swar arr pay Lat
Comment by Anonymous — December 10, 2008 @ 2:21 pm |
5. why waited
Comment by HK — December 10, 2008 @ 8:36 pm |
6. နားလည်ဘူးး မူးသွားတယ် ။ မောင်က ချစ်လို့ညာတာပဲနော့် အချစ်ဆိုတာ တစ်ခါခါတော့ ရိုးသားစွာလှည့်ဖြားခြင်းတွေလိုတယ် ဒါမှ ကာရန်လေးတွေလှလာမှာ
Comment by မောင်မျိုး — December 10, 2008 @ 11:03 pm |
7. မလေးဆိုလိုတာကို နားလည်အောင် ကြိုးစားရင်း.. မဖတ်တတ်တဲ့စာတွေကိုလည်း ကြိုးစားဖတ်ကြည့်ရင်း ပြုံးမိပါတယ်။
Comment by ShwunMi — December 11, 2008 @ 4:22 am |
Comment by ညခင်းနဲ့ လမင်း — December 11, 2008 @ 6:47 am |
9. ညီမလေး အိမ်လေးရေ… မတွေ့တာကြာလို့ လာသွားတယ်နော် ကောင်းလိုက်တဲ့ မ ရယ်…..
Comment by yamin — December 11, 2008 @ 7:31 am |
10. လေယာဉ်ပျံရော ပျက်ကျသွားသေးလား?း)
Comment by ဒိုင်းဝီ — December 11, 2008 @ 8:14 am |
11. အနောနမစ်… အမ မနည်းဖတ်လိုက်ရတယ်..
HK…. မစောင့်ပါဘူး..ကောင်မလေးက ကြုံတော့မှ သွားကြည့်လိုက်တာထင်တယ်..
မောင်မျိုး.. ရိုးသားစွာလှည့်ဖျားခြင်းတဲ့လား.. စကားလုံးလေးကြိုက်သွားပြီမောင်လေးေ၇..
ရွှန်းမီ… တစ်ခါတစ်လေပဲ ခက်လို့ တော်တော့ပါတယ် ညီမရယ်..
ယမင်း… မင်္ဂလာပါ အစ်မရေ..
ဒီဝိုင်း.. ဖွဟဲ့.. ဖွ..
Comment by မလေး — December 11, 2008 @ 1:03 pm |
12. မလေး ဘုရားကျောင်းတွေမရှိဘူးဆိုတာ အဖိုးကြီးရဲ့ပြောစကားလေ…:P
Comment by shinminnyo — December 11, 2008 @ 2:18 pm |
13. စိတ်ဆိုတာ ခက်သားလား။ ကောင်မလေးက သူစိတ်မ၀င်စားတဲ့သူရဲ့ စကားမှန်မမှန်တော့ သိချင်တာကိုး။
Comment by ပုံရိပ် — December 11, 2008 @ 7:07 pm |
Comment by mgmoekhin — December 11, 2008 @ 8:35 pm |
15. တကယ်တော့ အဘိုးကြီးက Coma ဖြစ်ပြီး အကြာကြီး အိပ်ပျော်နေခဲ့တာဗျ.
အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ ဘုရားကျောင်းသုံးခုလုံးက အဖျက်ခံလိုက်ရတယ်. ဒါက Option (1) ပေါ့.
နောက်ထပ် Option ကတော့ အဘိုးကြီးက အဘွားကြီး ဆုံးသွားကတည်းက ညနေခင်းတွေဆို အဲဒီ့နေရာလေးမှာ ထိုင်ပြီး ငိုင်တွေဆွေးနေတတ်တယ်. အဘွားကြီးနဲ့ အဘိုးကြီး လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ ဘုရားကျောင်းလေးကို ကနေဒါအစိုးရက ပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်တာကို စိတ်နာပြီး ဒီလမ်းထဲမှာ ဘာ ဘုရားကျောင်းမှ မရှိဘူးလို့ ပြောလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်. သနားပါတယ်. အဘိုးကြီးကြေကွဲနေရှာတယ်နော်.
အဲဒါက Option(2) ပေါ့ဗျာ.
Option (3) ကတော့ ကောင်မလေး ရောက်တဲ့မြို့မှားနေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်.
ကောင်လေး ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာ တွေးကြည့်လိုက်တော့…
သူ ကောင်မလေးကို မရနိုင်တော့တာ သေချာသွားမှန်းလည်းသိရော လွမ်းစရာကိုနာစရာနဲ့ ဖြေမယ်ဆိုပြီး နောက်တစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပစ်လိုက်ရင်း ဇာတ်မြုပ်နေထိုင်ပစ်လိုက်တယ်.
လေယာဉ်ပေါ်မှာ အသည်းကွဲပြီး ရင်ပူတာကို သက်သာလိုသက်သာငြား ဂျင်ဂျာအေး မှာသောက်လိုက်ရော… ဂျင်ဂျာအေးကို တစ်ချိုက်ထဲသောက်ပစ်လိုက်တာ သီးသွားပြီး ဆေးရုံရောက်၊ ဆေးရုံမှာ Medical Checkup လုပ်… အရင်တုန်းက မသိခဲ့တဲ့ ရောဂါတွေ ပေါ်လာ. အရမ်းရှက်ပြီး ကောင်မလေးကို အဆက်အသွယ်မလုပ်တော့တာ ဖြစ်နိုင်တယ်. မယုံရင် ကန်တော်ကြီးအင်းလျားနားက ဆေးရုံတွေ မေးကြည့်ပါလား..
မသိတော့ဘူးဗျာ. ဇာတ်လမ်းလေးက ဖတ်ရတာကောင်းတယ်. ဒါပေမယ့် တဖက်သတ်ကြီး အဆုံးသတ်ထားတယ်ဗျာ. မသိရင် ယောင်္ကျားလေးတွေကပဲ မိန်းကလေးတွေကို ညာရွှီးဖြီးဖြန်းနေသလိုလို.. ပြီးတော့လည်း ကောင်မလေးက အဘိုးကြီးတစ်ယောက်တည်းရဲ့ စကားနဲ့ နေကာမျက်မှန်ကို ကောက်တပ်ပစ်လိုက်တယ်… မေးပါဦးလား. အထဲမှာ ထိုင်နေတဲ့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တို့၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ဂိတ်ထိုးထားတဲ့ တက်(က်)စီသမားတို့၊ ဟိုးဖက်ထောင့်မှာ ထိုင်ပြီးကဗျာရေးနေတဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ယောက်ကိုပေါ့. ဘလော့ဂါတွေဆိုရင် ဓာတ်ပုံအထောက်အထားနဲ့တောင် ပြောပြမလားပဲ
Information မစုံသေးဘဲ ဆုံးဖြတ်တာ ကောင်လေးအတွက် သနားဖို့ကောင်းပါတယ်. တကယ်ဆို သူ ကိုယ့်နားမှာ မနေနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တောင် ဖြူစင်ရိုးသားစွာနဲ့ ကောင်မလေးရင်ထဲမှာ ကျန်နေခဲ့စေချင်တယ်.
ကိုရန် - Kan Yo (အတုတွေပေါ်နေမှာစိုးလို့ Trademark Registered လုပ်လိုက်တာ. )
Comment by ကိုရန် -- Kan Yo — December 11, 2008 @ 9:43 pm |
16. ရှင်မင်းညို.. ကောင်မလေး ကိုယ်တိုင်လဲ တွေ့ဘူးလေ
ပုံရိပ်ရယ်… မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောတာလေ…
ကိုရန်…. ကနေဒါမှာ ရှားစောင်းပင်မရှိဘူး။ စာလဲ သေချာမဖတ်…. ရသလေးတော့ ပျက်ပါပြီ…
Comment by မလေး — December 12, 2008 @ 12:32 pm |
17. မမရေ… စဖတ်ဖတ်ခြင်းမှာ ပင်လယ်လေတွေကြား ရောက်နေသလိုပဲ… အပြီးသတ်ကျတော့ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးကို ပြုံးမိတယ်… မမစာတွေကိုဖတ်တိုင်း စိတ်ထဲမှာ တကယ်တန်ဖိုးထားမိပါတယ်…
Comment by ရွှေပြည်သူ — December 12, 2008 @ 10:48 pm |
18. ညီမစာတွေကိုလဲ အပြန်အလှန်ပါပဲ ညီမရွှေပြည်သူး)
Comment by မလေး — December 15, 2008 @ 8:59 pm |
Comment by kotharrnge — December 16, 2008 @ 1:34 am |
Comment by Angel Eyes — December 17, 2008 @ 10:31 pm |
21. ကိုသားငယ်.. ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ကြပါစေ…
Angel Eyes …
အင်န်ယူအက်စ်က ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားကိုယ်တိုင်လာမှတော့ ဒီထက်ပိုကြိုးစားရေးရမှာပေါ့ဟာ..
ငါကမတရားဘူးနော်.. ကိုယ့်အကြောင်းကျမပြောဘူး၊ သူများကြောင်းကျရေးနေတယ်.. နင်မကြိုက်ရင် ဒီကော့မန့်ဖျက်ပေးပါ့မယ် သူငယ်ချင်းရေ…
ကျန်တဲ့ ရသလေးတွေကလဲ ကြည့်တတ်ရင်.. hidden message လေးတွေပါတယ်သူငယ်ချင်း..
Comment by မလေး — December 18, 2008 @ 3:47 pm |
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:10 AM6comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
မပြောချင်လို့သာပဲ.. ပြောလိုက်ရတဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းရယ်…
ကိုယ့်ကိုကိုယ် မုန်းတဲ့ အချက်များတဲ့ … ကိုရန်အောင်က တက်ဂ် ပါတယ်။
၁) ကိုယ့်အကြောင်းကို မပြောချင်ခြင်း
အဲဒီက စတော့တာပါပဲ။ မပြောချင်ပါဘူး ဆိုမှ တက်ဂ်လိုက်ကြတာပါပဲလား။ အဲဒီဂိမ်းက ဘလော့ဂ်တွေ စပေါ်စဉ်က ကိုတက်စလာက စလိုက်တာလို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်ရှင်။ နာမယ်နဲ့လဲ လိုက်ပါတယ် တက်စလာတဲ့..။ သူတက်ဂ်ကာမှ တောက်လျောက်တက်ဂ်ကြတာ ခုတော့ မပြောချင်တာတွေလဲ ပြောရပြီပေါ့နော်…။
ကျွန်မက ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်မ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာနေတယ်၊ ဘာလုပ်တယ် စသဖြင့် လုံးဝမပြောချင်ပါဘူး။ တစ်ခြားဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ ကျွန်မရဲ့ ကလောင်နဲ့ စာတွေကိုပဲ အလေးထားစေချင်တဲ့ သဘောပါ။ ကျွန်မစာတွေကို စာ အနေနဲ့ပဲ မြင်စေဖတ်စေချင်တယ်။ ကျွန်မဟာ မိန်းမတစ်ဦးဖြစ်နေလို့၊ အသက်က ဘယ်အရွယ်မို့လို့၊ အလုပ်အကိုင်က ဘာမို့လို့၊ လခက ဘယ်လောက်ရနေလို့၊ မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဘာမို့လို့ စတဲ့ ပေတံတွေနဲ့ စာပေကို ဘောင်ခတ်လိုက်မှာကို မလိုလားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ (ပြောရင်း လေအရမ်းရှည်ပြီး စီးယီးရပ်စ်တွေ ဖြစ်လာပြန်ပါပြီ)
ပထမ ကလောင်နာမယ်ကို ယောင်္ကျားနာမယ်တောင် ထွင်ပြီး ယူဦးမလို့။ “ဟယ်… ဒီကဗျာဆရာလေးက ကလောင်လေးကလဲလှ၊ ကဗျာလေးတွေကလဲ မဆိုးဘူးဟဲ့” အဲသလို အဲသလို ဖြစ်ချင်တာ။ ၀န်ခံရရင်တော့ လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ် တော်တော်ငယ်ငယ်က၊ yahoo group တွေ ခေတ်စားတုန်းကပါရှင်။ yahoo group တွေဖွဲ့ပြီး ကဗျာတွေ၊စာတွေတင်ပြီး နာမယ်လေး လူနည်းနည်းလေး သိလိုက်ပါသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက groupပေါ်တက်တာနဲ့ ကောင်မလေးတွေက အရမ်းလိုက်ပြီး စကားပြောတာနဲ့ မနိုင်တော့လို့ ပြေးရပါတယ်….ခွိ..။ (ကလောင်နာမယ်တော့ မပြောပါရစေနဲ့တော့… ၀ိုင်းရိုက်ခံထိမှာစိုးလို့) နောက်တော့ ကိုယ်က ထွင်တာပေမယ့် လိမ်သလိုဖြစ်မယ်လေ ဆိုပြီး အိမ့်ချမ်းမြေ့ နာမယ်နဲ့ပဲ အွန်လိုင်းလောကထဲကို ၀င်လာတယ်ဆိုပါတော့ရှင်။ အွန်လိုင်းလောကထဲမှာပဲ ကိုယ့်အကြောင်းမပြောချင်တာလားဆိုတော့လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အပြင်လောကမှာလဲ ကိုယ့်အကြောင်း မပြောချင်သူပါ။ (မပြောချင်လို့ပဲ တော်တော့တယ်နော်.. အဟွန်း)
ငယ်ငယ်လေးထဲက ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ဘယ်အလုပ်ကို ပြီးရမယ်ဆိုတာကို အချိန်ဇယားလိုကို ချမှတ်ပြီး လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်လဲ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းနေပါစေ၊ ဘယ်လောက်ခက်ခဲပါစေ၊ မရပ်မနား ပြီးသည်အထိလုပ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကောင်းကျိုးတွေရှိသလို၊ ဆိုးကျိုးတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ပင်ပန်းလွန်းလို့ အိပ်ရာထဲ ဗုန်းဗုန်းလဲတဲ့ အထိ အလုပ်လောဘကြီးတတ်ပါတယ်။
၃) အားနာတတ်ခြင်း၊ သနားတတ်ခြင်း
အဲဒါ ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ် သိပ်မုန်းတဲ့ အချက်ပါ။ လူလည်တွေ၊ ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်သူတွေ၊ လေလုံးထွားထွားနှင့် ကြွားဝါနေသူတွေ၊ လူလူချင်း အသုံးချတတ်သူတွေကိုတောင် မသိဟန်ဆောင်၊ အ ချင်ဟန်ဆောင်ပေးနေတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နားမလည်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ သူတို့ကို စာနာနေတယ်၊ နားလည်ပေးနေတယ်။ ပြီးတော့ ခံလိုက်ရပြီး အိမ်ပြန်ရောက်လာရတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မုန်းပါတယ်။
၄) တစ်စုံတစ်ရာကို မြိုသိပ်နေပြီး တစ်အုံနွေးနွေးဖြစ်နေတတ်ခြင်း။
ခုနက နံပါတ် သုံးမှာ ခံလိုက်ရတာကို ဖြစ်နေတာပါ။ အဲဒါကြီးက အတော်ကိုဆိုးပါသည်။ ပေါက်ထွက်တဲ့အခါမှ မလှမပတွေ ဖြစ်ကုန်တတ်သည်မို့၊ လူလတ်ပိုင်းလဲ ရောက်လာပြီမို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြုပြင်နေပါသည်။
၅) မိန်းမဖြစ်ပြီး ထမင်းဟင်းချက် ၀ါသနာ မပါခြင်း
ဟုတ်ကဲ့၊ အချိန်ကုန်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ မိန်းမဖြစ်သောကြောင့် ထမင်းဟင်းချက်ရမည်ဟု မည်သူက သတ်မှတ်လိုက်ပါသနည်း။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နာမယ်ကြီး cook များဟာ ယောင်္ကျားများသာဖြစ်ပါသည်။ Christmas Dinner, Thanksgiving Dinner တွေမှာ ဆွေမျိုးမိသင်္ဂဟတွေစုလို့ ချက်ရတာထား၊ နေ့စဉ် မီးဖိုထဲမှာ တကုတ်ကုတ်ချက်နေရသည်ကို မနှစ်သက်ပါ။ လူ့သက်တမ်းတိုတိုလေးမှာ အခြားလုပ်စရာများစွာ ရှိနေပါသည်ဟု မြင်ပါသည်။ ကျွန်မရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ အစားအသောက်ကို ဇီဇာမကြောင်သော ယောင်္ကျားများသာ ရှိနေသောကြောင့်လဲ ကျွန်မ သည်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ၀ါသနာမပါသော်လည်း မိန်းမတစ်ယောက် တတ်သင့်သော ပညာရပ်ဟု လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက သတ်မှတ်ထားသောကြောင့်၊ အထက်တန်းလွှာ ထမင်းစားပွဲကို အမျိုးမျိုးပြင်တတ်အောင် သေချာကို ဆရာခေါ်သင်ထားသော အဒေါ်၏ ကောင်းမှုကြောင့်၊ ကျွန်မ ထမင်းစားပွဲလှလှတွေလဲ ခင်းတတ်ပါသည်၊ မြန်မာစတိုင်လား၊ ဂျပန်စတိုင်လား၊ အနောက်တိုင်းစတိုင်လား အကုန်ခင်းကျင်းတတ်ပါသည်။
စားပွဲခင်းတတ်တယ်ဆိုလို့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်မဦးလေးတစ်ယောက်က ငယ်ငယ်တုန်းက ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ကျောင်းကထိန်အလှုမှာတွေ့တယ်တဲ့။ ကောင်မလေးက လူတွေစားထားတဲ့ စားပွဲမှာ ကျနေတဲ့ ထမင်းစေ့၊ ဟင်းဖတ်လေးတွေကို လက်ကလေးနဲ့ ကောက်သိမ်း၊ ရှင်းလင်းပေးတော့ ဦးလေးက “အော်.. ဒီမိန်းကလေးနှယ် တော်လိုက်လေခြင်း၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်လိုက်လေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်မှုလဲ အတော်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မယ်ထင်ရဲ့” ဆိုပြီး ချစ်မြတ်နိုးပြီး နောက်ဆုံး ယူလိုက်ကြသတဲ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကောင်မလေးဟာတဲ့ အမကြီးဖြစ်၊ အဒေါ်ကြီးဖြစ်တဲ့အထိ စားပွဲက ထမင်းစေ့တွေကို လိုက်ကောက်တဲ့ အဆင့်ကနေကို မတက်တော့ဘူးတဲ့ကွယ်..။
ကျွန်မလဲ အဲလိုပါပဲလို့ မပြောလိုပါဘူးရှင်။ ကျွန်မ စားပွဲလှလှလေးတွေခင်းတတ်သလို၊ ဘယ်ဟင်းလာလာလဲ ချက်တတ်ပါသည်။ တရုပ်စာလား၊ ကုလားစာလား၊ ရှမ်းစာလား၊ ဗီယက်နမ်စာလား အကုန်ချက်တတ်ပါသည်။ သို့သော် …. ကျွန်မ ချက်ထားသောဟင်းတွေဟာ တရုပ်စာဟာ ကုလားဒီဇိုင်းထွက်ချင် ထွက်နေတတ်တာမို့ ချက်တော့ချက်မယ်၊ လက်ရာ ကောင်းတာ မကောင်းတာတော့ လုံးဝ တာဝန်မယူပါရှင့်း)))
၆) ရှားပါးသစ်သီးများကိုသာ နှစ်သက်ခြင်း
ရန်ကုန်မှာတုန်းကဆိုရင် ရှားပါးတဲ့ မရနိုင်တဲ့ သစ်သီးတွေမှ စားချင်ပါတယ်။ ကနေဒါရောက်တော့လဲ ဈေးကြီးတဲ့ သရက်သီးတို့၊ မင်းကွတ်သီးတို့မှ စားချင်ပါတယ်။ ပန်းသီးတို့၊ လိမ္မော်သီးတို့ကိုတော့ မုန်းပါတယ်၊ ဘယ်တုန်းကမှ မကြိုက်ပါ။
လူတွေရုန်းရုန်း ရုန်းရုန်းနဲ့ လိုအပ်သည်ထက် ပိုပြီး ဘယ်တုန်းကမှ မနေတတ်ခဲ့ပါ။ ဘေးမှာ စကားတွေတစ်ယောက်တစ်ပေါက်တွေ ပြောနေရင်လဲ ဘာမှ မကြားတော့ပါ။ ငယ်ငယ်ထဲက picnic တွေသွားရင်လဲ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်လောက်နဲ့ လူတွေနဲ့ ဝေးတဲ့ ရေစပ်တို့၊ တောင်ပေါ်တို့ တက်ထိုင်နေတတ်ပါသည်။ မိန်းကလေးတွေ ယောင်္ကျားလေးတွေ တွန်းလိုက်၊ ထိုးလိုက်၊ ရိုက်လိုက်နှက်လိုက်နဲ့ flirt လုပ်နေကြရင် ကြားထဲမှာ ကိုယ့်အသားကို လာထိမှာကို တော်တော်ကြောက်ပါသည်။ လူ့ဂွစာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ နောက်ပြီး အထူးသဖြင့် အုပ်စုထဲမှာ ဆရာကြီးလုပ်ပြီး ဟောပြောပို့ချနေရင် ဘာကိုမှ နားမ၀င်တော့ပါ။ အတင်းကြိုးစားနားထောင်ရင်တောင် မျက်လုံးကြီးတွေကသာ အာဘောင်အာရင်းသန်နေသူကို စိုက်ကြည့်နေပေမယ့် brain က shut down ကိုဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ လူတိုင်းကိုယ့်အတွေးအခေါ်အယူအဆ ကိုယ်စီရှိသည်ဟု လက်ခံသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပညာပိုတတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဂုဏ်တွေပိုရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူကို ဆရာကြီး မလုပ်သင့်ဟု ယူဆယူဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်က သတ်သတ်ကြီးဖြစ်နေတတ်တာကို မုန်းပေမယ့် စက်ဝိုင်းတွေရဲ့ အပြင်မှာ တစ်ဦးတည်းပဲ ဆက်လက်နေဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
၈) ပျော့ပျော့လေးနဲ့.. ခေါင်းမာခြင်း
မိဘတွေခေါ်တာ မပြောချင်ဘူး။ (ပျော့ပျော့လေးနဲ့ နံတဲ့….xxxxx ) ဟာတဲ့။ ဘယ်သူနဲ့မှလဲ ပြန်လည်ငြင်းခုန်ခြင်း၊ ရန်ဖြစ်ခြင်း မရှိပါဘူး၊ အေးအေးလေးနဲ့ ပျော့ပျော့လေး နေပြီး ဘယ်သူ့ပြောတာမှလဲ နားမထောင်သူ တစ်ဦးမို့ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ အကျင့်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ တစ်ယောက်သောသူ ပြောသလို သွေးအေးထုံပေတဲ့ မိန်းမတစ်ဦးမို့ ဒီအချက်ကိုလဲ မနှစ်သက်ပါ။
၉) အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အချိန်ကုန်နေခြင်း
ကျွန်မ တစ်ပတ်ကို ပိုစ်တစ်ခုလောက် အနည်းဆုံး တင်တာတောင် များတယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်က လူတွေတော်တော်များများကို ကျွန်မ ခင်မင် လေးစားတယ်၊ အတွေးအခေါ်အယူအဆမျိုးစုံ၊ နည်းပညာ ဗဟုသုတအစုံ၊ ကျွန်မရတယ်။ personality မျိုးစုံကို လေ့လာတွေ့ရှိရတယ်။ သတင်းတွေ၊ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေကို မြင်ရတယ်။ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်တွေ အကုန်မရောက်ပေမယ့် တော်တော်များများကို ရောက်ပါတယ်။ ခြေရာမချန်တာသာရှိတာပါ။ အခုလို လေ့လာသင်ယူစရာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့်လည်း၊ ဂျီတောခ့်လဲ တက်လေ့မရှိပေမယ့်လည်း၊ ကျွန်မကိုယ်ကိုကျွန်မ လိုအပ်သည်ထက် အွန်လိုင်းမှာ အချိန်ပိုကုန်နေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
၁၀) ငြီးငွေ့ပြီဆိုရင် လုံးဝ လှည့်မကြည့်ချင်တော့ခြင်း
ဘ၀ရဲ့ တစ်ဆယ့် ခွန်နှစ်နှစ်၊ တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်တိုင်းမှာ တိုင်းပြည် တစ်ခုခုကို ပြောင်းရွှေ့နေလိုတယ်။ ကျွန်မ အသက် တစ်ဆယ့်ငါး တစ်ဆယ့်ခြောက်လောက်တုန်းကလဲ ရန်ကုန်မြို့ပြ၊ အနံ့အသက်၊ လူတွေ၊ အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ အကုန်လုံးကို ငြီးငွေ့လွန်းတာရယ်၊ adventure ကို ရှာမလိုလို၊ ဘ၀တိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲတော့မလိုလိုနဲ့ ငယ်သွေးကြွပြီး မိဘတွေကို နားပူနားဆာလုပ်ပြီး ကနေဒါကို ရောက်လာခဲ့တာပါပဲ။ အခုတော့ ကနေဒါကို အရမ်းပျင်းနေပြီ။ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ မြို့ပြ အဆောင်အယောင်၊ စားစရာ၊ အနံ့အသက်၊ shopping mall တွေကို ငြီးငွေ့လွန်းနေပြီ။ အနောက်ကို အတုယူထားတဲ့ အရှေ့တိုင်းပြည်တွေဆိုရင်တော့ ဝေလာဝေးပဲ။ ပိုဆိုးတော့ မပေါ့။ ရန်ကုန်လဲ သိပ်တော့မထူးဘူး။ ကိုးရီးယားတိုင်းပြည်ရောက်နေသလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ မထူးဘူး။ မြို့ပေါ်က မိန်းကလေးတွေက ၀တ်တတ်စားတတ်လာတော့ ပိုလှလာတယ်။ ကိုးရီးယား ဒီဇိုင်းဆိုပေမယ့် လှပါတယ်။ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်လဲ ဆင်းရဲတယ်သာပြောတယ်။ စားသောက် ပျော်ပါးနေကြတာပဲ။ မိုးလင်းရင် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တိုင်း၊ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တိုင်းဟာ လူအပြည့်၊ ညနေဆိုလဲ ဘီယာဆိုင်တိုင်း၊ စားသောက်ဆိုင်တိုင်း လူအပြည့်။ ရွှေဘဲမှာဆို ဘယ်ညနေသွားသွား ခြေချစရာမရှိဘူး။ shopping mall တွေမှာလဲ လူတွေက အလကားပေးနေသလိုပဲ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဆိုလဲ ရွှေရောင်ငွေရောင်တွေ တဖျတ်ဖျတ်နဲ့။ ညခင်းတွေမှာ ရန်ကုန်မြို့ ပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာလဲ ပျံကျဈေးသည်တွေရဲ့ တောင်းတွေထဲက ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ရုံးပတီသီးကြီးတွေ၊ ဗူးသီး၊ သခွား၊ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေ၊ ထွားကြိုင်းလွန်းတာတွေကိုမြင်ရတယ်။ စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ ချောင်ချိုချောင်ခြားက မြို့ပြင်ရပ်ကွက်လေးတွေထဲလဲ ကျောပိုးအိတ်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ ကျွန်မရောက်တယ်။ လူရှင်းတဲ့ သစ်ပင်အောက် အဖော်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ မသိမသာရပ်နေရင်း ဖြတ်သွားတဲ့ ကလေးတွေကို ပေးချင်တာတွေ ကျွန်မပေးတာပါ။ သူတို့ဘ၀မှာ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ အရာတွေလို့ပဲ ဆိုပါတော့ရှင်။ ဒီက အလှုခံသွားတာတွေကော၊ ကျွန်မ စုထားတာလေးတွေကောပေါ့။ ကလေးတွေခြေထောက်မှာ အနာပလပွနဲ့ အနာပေါ်ကို ကျွတ်က တက်နေသေးတယ်။ ဒါလဲ ပျော်နေတာပဲ။ မျက်နှာလေးတွေက ပျော်နေတာပဲ။ သူတို့ အမေတွေဆိုလဲ ရင်လျားနဲ့ သန်းရှာနေတာတွေ၊ ရယ်မောပြီး စကားတွေပြောနေတာတွေ မြင်ရတယ်။ သူတို့ကြည့်ပြီး ကျွန်မ အပြီးပြန်ချင်စိတ် အရမ်းပေါက်နေတယ်။ ကနေဒါကို ငြီးငွေ့နေပြန်ပါပြီ။
ကျွန်မ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုအနေနဲ့ ရှင်မင်းညို ကို တက်ဂ်ချင်ပါတယ်။ ညီမအဆင်ပြေရင်ရေးပေးပါနော်။
1. ၃၊ ၄၊ ၈ အချက်တွေကိုဖတ်ပြီး ငါထင်တာနဲ့မမှားပါဘူးလို့စိတ်ထဲဖြစ်သွားတယ် shopping mallတွေကိုငြီးငွေ့ပြီလား ကျနော်ဆို အပြင်ကပဲ မြင်ဖူးတယ် ၀ယ်မနိုင်လို့မရောက်ဖြစ်
Comment by မောင်မျိုး — December 8, 2008 @ 6:33 pm |
2. အဲ မလေးရေ ဒုခွ…
Comment by shinminnyo — December 8, 2008 @ 7:06 pm |
3. it’s so nice , there ’s nothing special comment to say odd. thank to see ur words, and hope that get to see u more and more ..
Comment by mgmoekhin — December 8, 2008 @ 8:13 pm |
4. (၁) တော်သေးတာပေါ့. အဲဒီ့တုန်းက ကျွန်တော် အွန်လိုင်းလောကနဲ့ သိပ်မနီးစပ်သေးလို့. မဟုတ်ရင် အဲဒီ့ကဗျာဆရာလေးကို လိုက်ချက်နေမိဦးမယ်. ဟတ်ဟတ်. နဂိုတည်းကမှ မာမီရန်ဆိုပြီး မျက်စောင်းထိုးချင်နေသူတွေက ဒုနဲ့ဒေး… အမလေး.. အသည်းယားလိုက်တာ မလေးရယ်… အက်အက်အက်…
(၂) အလုပ်လောဘကြီးတာကတော့ ယုံပါတယ်ဗျာ. ပို့စ်တွေ ဆက်တိုက်တင်နေတာသာ ကြည့်တော့. စာမပြန်နိုင်အားလို့ ဆီဗုံးတောင် ဘယ်ချောင်သွားဖွက်ထားတယ်မသိ.
(၃) မလေးက သနားတတ်တာကိုး… ကဲ.. မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ. ဆူတယ်လို့လည်း မထင်နဲ့ ပွမ်တယ်လို့လည်း မပြောနဲ့.
(၄) မျိုသိပ်နေတာကိုတော့သိတယ်. တအုံနွေးနွေးဆိုတာ ဘယ်လိုဟာကြီးလဲဟင်. သိဘူးဗျာ. ပြောပါဦး. သိုးမွေးမာဖလာကြီး လည်ပင်းမှာ မြွေပတ်သလို ပတ်နေတာကို ခေါ်တာလား… ဟုတ်တယ်လေ. တအုံကြီးရယ်… ပြီးတော့ နွေးနွေးကြီး… တအုံထွေးထွေးလို့ ပြောလည်းရတာပဲနော့..
(၅) အင်း… ဒါကတော့ မလေး ၀ါသနာမပါတာနဲ့ပဲ နာမည်ကြီး Chef တွေက ယောင်္ကျားတွေ ဖြစ်ရတော့တယ်. Rachel တို့လည်း ရှိပါသေးတယ်. ပြီးတော့ အိုပရာဝင်းဖရေးဆိုရင် ဘာတဲ့. ကောက်ညှင်းငချိတ်ပေါင်းတာ နာမည်ကြီးဆိုပဲဗျ. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မလေးချက်တဲ့ ပန်းသီးငါးပိချက်လေးကို သတိရနေတုန်းပဲ.
(၆) အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဗန္ဒာရသရက်သီးဆိုတာ ဂင်္ဂါမြစ်အထက်နားမှာ ရှိတယ်ဗျ. အရမ်းရှားတယ်. စားမလား. အိန္ဒိယရောက်ရင် ၀ယ်ခဲ့ပေးမယ်. ဟတ်ဟတ်. မလေးကြိုက်ပုံတွေက အဆန်းတွေပဲနော်.
(၇) အာပေါင်အာရင်းသန်နေသူကို စိုက်ကြည့်နေတတ်ပေမယ့် Brain ကတော့ Shut Down ဖြစ်နေတတ်သည်ဆိုတော့ ကော်မန့်ရေးရင်းနဲ့ လက်တွန့်သွားတယ်. ဟုတ်တယ်လေ. ကျွန်တော်က လေရှည်ပြီး တစ်ခုချင်း လိုက်ဖတ်၊ လိုက်ကော်မန့်ပေး၊ မလေးက အိပ်ငိုက်…
(၈) what’s xxxx? ပူစီနံကိုပြောတာလားဟင်. ဒါမှမဟုတ် ပျော့ပျော့လေးနဲ့ စားရတဲ့ အာတာပူစီကို ပြောတာလား. ဒါမှမဟုတ် ဒယ်အိုးပြားလေးပေါ်မှာ ကင်ထားတဲ့ ပျော့ပျော့လေးစားရတဲ့ ချပါတီလားဟင်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မလေးကပျော့ပေမယ့် မာတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပြီ။ (ခေါင်းမာတာ) ဧရာမလျှို့ဝှက်ချက်ပေပဲ. တန်ဖိုးရှိလှပါဘိတောင်း.
(၉) ကျွန်တော့်ဆီကို လာရင်တော့ ခြေရာမချန်နိုင်ရင်တောင် လက်ရာလေးတော့ထားခဲ့ပါ. ဆရာစံဇာဏီဘိုဆီ ပို့ပြီး ဗေဒင်တွက်ခိုင်းမလို့. ပုတိဖွားလား၊ ရာဇဖွားလား၊ ကျွန်တော်ကတော့ ဂျမခါနာဖွားဗျ. ဟိုးအပေါ်ဆုံးထပ်မှာကို မွေးတာ. Fully Air-conditioned Room. ဘာမှတ်လဲ.
(၁၀) ဟုတ်တယ်ဗျ. နော်. ကနေဒါက ပျင်းစရာကြီး… ခေါင်တယ်. Vacation ရရင် ဒီဖက်လာခဲ့လေ. ကျွန်တော်တို့ဆီမှာက အမြဲတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတာ. Always alive and kicking. ဘေ့စ်ဘောလိုက်ပြမယ်. စကိတ်စီးတာရှိတယ်. ကမ်းခြေတွေကလည်း လှမှလှ၊ ကမ္ဘာကျော် ဘရွတ်ကလင်း တံတားကြီးကလည်း အမြင့်ကြီးရယ်. ဟို မီးတိုင်ကိုင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးကလည်း အရမ်းလှတယ်.
ကနေဒါ… ဘာရှိလဲ… ဘာရှိလဲ…
မလေးကို မစရတာ ကြာပြီ။ အခုလိုမျိုး အားရပါးရ စလိုက်ရတာ ပျော်လိုက်တာ…
ရေးပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်. စက်ဝိုင်းထဲမှာ ဆက်ပြီးမှိန်းမနေနဲ့တော့ဗျာ. ထွက်ခဲ့ပါ. ပို့စ်တွေ မျှော်နေမယ်.
Comment by Yan — December 8, 2008 @ 10:26 pm |
5. If I am not wrong, you must beaPisces born (19 Feb ~ 20 Mar).
Comment by Fake_Sanzarnibo — December 9, 2008 @ 6:35 am |
6. ဘာပြောပြော နာတော့ မလေးအကြောင်းနဲနဲ တိတွားပီ
အနော်က နေတတ်ဘူးဂျ ရဘူး လာလည်ရင်တော့ လာရှုပ်မှာပဲဏော် ဒါပဲ ကြိုပြောထားတရ်
အဲ..ကနေဒါကိုငြီးငွေ့ရင်တော့ ချင်ပူမှာလာနေလေ ထမင်းဟင်းချက်ဝါသနာမပါလဲ တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးအောင် ကျွေးမယ်(၀ယ်ကျွေးမယ် အဟိဟိ)ချင်ပူမှာ ရှားပါးသစ်သီးကတော့ ဇီးဖြူသီးပဲထင်တယ် ညန်မာကမှာပီး ထောင်းကျွေးမယ် ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းချား တိရား
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အချိန်ကုန်တယ်တဲ့ အနော်နဲ့တော့ ဂျကားကြောဘူး တော်ပီ ချိတ်ကောက်ဒယ်
အော်.. မှာထားဦးမယ် ကွန့်မန့်မှာ ရီပလိုင်း အရှည်ကြီးရေးတဲ့သူချိရင် တနားနဲ့ဏော် အဲလူတွေက …(အဟိ တိုက်ဆိုင်ရင် ခွေးလွှတ်ဗျို) ဒါပဲဒါပဲ ထပ်ပြောရင် မကောင်းတော့မစိုးလို့ဏော်ဏော်
အင်း ဘိုင်ဒဝေး ရင်ဖွင့်ချင်တာတွေရှိသေးလဲလာခဲ့နော်
Comment by မယ်လိုဒီမောင် — December 9, 2008 @ 9:38 am |
7. Ma Lay,
We are on the same page with you on #10. I am sooooo tired of staying in one place for so long but but but …which area would be the best to live. I dunno. I love country side, majestic mountains (it reminds me of Ps 121).
Comment by lynda — December 9, 2008 @ 9:56 pm |
8. မောင်မျိုး.. မောင်လေးထင်တာတွေက လွဲခဲပါတယ်..း))
ရှင်မင်းညို… ညီမ အဆင်ပြေမှပါနော်.. အေးအေးဆေးဆေးပဲ..
မောင်မိုးခင်… ကျွန်မ ဆက်လက်ကြိုးစားနေပါတယ်ရှင်.. အားပေးတာကျေးဇူးပါ..
ကိုရန်အောင်… မလေး brain တစ်ကယ် shut down ဖြစ်သွားပါတယ် (နောက်တာပါရှင်)
ကိုစံဇာဏီဘိုအတုရေ…. အတုဆိုသည့်တိုင်းမှားပါသည်.. ကျွန်မက Aquarius ပါရှင်..
မမီ… အွန်လိုင်းကို မတက်တော့သလောက်ဖြစ်သွားလို့ မမီရဲ့..
အိမ်ရှင်မ… မလေးနေတဲ့မြို့လေးက တောင်တွေနဲ့ ပင်လယ်ပြာတွေ၊ ကန်ကြီးတွေနဲ့ လှတော့လှတယ်.. လာနေပါလားး))
Comment by မလေး — December 10, 2008 @ 11:47 am |
တူနေတာတွေ ရှိမယ်ထင်တယ်..။ မ ဂဏန်းတွေချည်း တိုက်ဆိုင်တယ်..။း-)
ညီမကတော့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ အများကြီး ပိုမုန်းမိတယ်။
Comment by ShwunMi — December 11, 2008 @ 4:33 am |
10. တစ်ခါက နှစ်ခါ၊ နှစ်ခါက သုံးခါဆို ဟုတ်ပါ့မလားတောင် သံသယ၀င်စရာ…
နံပါတ်6မှာ လုံးဝကွဲသွားတာလေးတစ်ခုပဲ။
အကြောင်းသိလေ ပိုနီးစပ်လေပါ မလေးရေ…
စိုးရိမ်တကြီးမေးခဲ့တဲ့ ရေးဟန်လေးကို သိမ်းထားတယ်။ မလေးရဲ့အမှတ်ရမှုနဲ့ ညီမလေး ပြန်ပြေးလာတာ။
Comment by အေးချမ်းသူ — December 17, 2008 @ 4:06 am |
11. friend, although we haven’t been keeping in touch for 17 years, now i think i know and understand u more from ur writngs… he he…all the best…
Comment by Angel Eyes — December 17, 2008 @ 10:35 pm |
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:38 PM2comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကန်တော်ကြီး အလှဓာတ်ပုံတွေကို စိတ်ကူးရတုန်းက လုပ်ထားတဲ့ movie clip
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျမလို ဝေးနေသူများတွက် ရည်စူးပါတယ်ရှင်။
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:58 AM6comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ